Idzi ndidzo nhau makumi matanhatu nenomwe idzo iOS 64 yako | IPhone nhau
iOS 11 yakaitwa kuti iwanikwe kune vanogadzira neMuvhuro mushure mekuratidzwa kwakavhura iyo WWDC. Kubva ipapo tanga tichichiyedza uye kushamisika kwave kuri kwakawanda, zvakanyanya kuve nani. Apple yaisanganisira mune yayo nyowani system yakawanda yakanaka nhamba yezvinhu zvitsva pane izvo zvaasina kutaura nezvazvo panguva yekuratidzwa, uye pano tinokuunzira muunganidzwa wezvese zvatakakwanisa kuwana mumazuva ano.
Kunyangwe iri yekutanga beta vhezheni, iOS 11 inoshanda zvirinani kupfuura zhinji dzeshanduro dzekare, nerunyararo rwusinganzwisisike kuwana kutora mazuva mana akaverengwa pakati pedu. Kunyangwe zvakadaro, zvikanganiso uye zvidiki netsikidzi Ivo anowanzoitika mukushandiswa kwezuva nezuva, izvo zvisiri chipingaidzo chekusatsvaga mune zvese izvo zvazvino uno musoftware software zvinopa kubva kumahofisi eCupertino.
Mazhinji eaya matsva haamiriri shanduko huru kune hupenyu hwevanhu vezuva nezuva, asi kune zvimwe izvo pasina mubvunzo ichaita kuti zvioneke kuvandudzwa mukushandiswa kweiyo iPhone mune zvakanyanya mazuva ese zvinhu. iOS 11 inoyeuchidza munzira dzinoverengeka dzeIOS 7, iyo sisitimu inoshanda iyo yakaita shanduko kubva ku skeumorphism kuenda ku 'flat design'. Kwete nekuti inomiririra shanduko huru padanho rekuona, asi nekuda kwezvinhu zvese zvidiki zviri muchirongwa zvinoita kunge zvakafungwazve kubva pakutanga pamwe nemushandisi mupfungwa, kuyedza kuve nekubatsira uye kupa zvakawanda.
Itsva iOS 11 izere neaya madiki nhau anoita kuti iwe ude iyo iPhone zvakare uye edza nayo zvizere, kunyange hazvo chiri chokwadi kuti pane zvakawanda zvekuisa wax uye yakawanda yekupolisha. Asi iwe unotanga nechimwe chinhu, uye kuchine mwedzi mishoma yakakosha yasara kusvikira yaitwa kuti iwanikwe kune veruzhinji munaGunyana kuti ivandudze, itange uye ivandudze zvakare.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 11 » Isu tinowana makumi matanhatu neshanu maficha eIOS 64
Kwazisai ... mubvunzo ... zviri sei kuti wave kutoshandisa 11 kana mabetas asati asvika? Ini ndakanyoresa kuma betas uye gumi nerimwe harisati ravepo kusvika parizvino ndiri pa11 ...
O nenzira iyo iwe unoziva kupfuura ini nezve zvese zvinoitika neapuro ... ichokwadi here kuti kuchave nekuputsika kwejeri kwechigumi nerimwe kana kusvika zvino runyerekupe rwakachena? Kutenda nekutichengetera ruzivo !!
Mhoro, zvakanaka kwazvo, mavhezheni ekutanga anotumirwa kune vanogadzira uye havaatumire ese kamwechete, anotumirwa mumasaisai. PS: Ini ndaive ndakanganisa kukupindura uye ndapindura Abelgg xD.
Hahaha ndatenda zvakadaro nekunetsekana uye mhinduro ... ndanga ndichitarisa izvo asi ivo vanogadzira vanofanirwa kubhadhara account yekuvandudza 99 madhora ... heck zvirinani ndinomirira mabheta kuti aburitswe haha ​​... kamwe zvakare ndatenda tichitizivisa ...
Mhoroi apo! Makorokoto pavhidhiyo, nekuti mazhinji acho haana kutsanangurwa kana kutsanangurwa kuburikidza nevakuru Apple chiteshi.
Wakagona here kumisa iyo «isingakanganise uchityaira»?
Pindura kuna Abelgg
Mhoro zvakanaka kwazvo, mavhezheni ekutanga anotumirwa kune vanogadzira uye havaatumire ese kamwechete, anotumirwa mumasaisai 🙂
hapana munhu anotaura nezvevaviri ava
Ndakavaisa mumacrumors uye havana kunditeera 😀
kuyedzwa ipad mini 2
- safari zvinongedzo. kubata chinongedzo nezvigunwe zviviri kuvhura mune itsva tabo (kwete nguva dzose kurudyi)
- bata munwe pane iyi link uye udhonza Ini ndinogona kuendesa kukero bar uye ndoda kupatsanura maonero asi ini handikwanise kuyedza
- mune tsamba iwe unodhonza faira rakanamatira kune yakavhurwa tsamba yeiyo nyowani nyowani (uchisiya iyo yakamirira pazasi kwechidzitiro uye kutsvaga faira reimwe rakagamuchirwa tsamba)
IOS 11 inoita kunge yakagadzirisa "OLE zvinhu" zvakaunzwa neWindows 95 kudesktop. Zvuva udonhedze
Pindura kune psycho_pata